दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैया बढाउने तयारी -
माघ ६, २०७८ माघ ६, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैया बढाउने तयारी
ललितपुर। सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको जनाउँदै मूल्य वृद्धिका गरेको अनुरोधपछि अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।
विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदै आए तापनि पछिल्लो समय साढे दुई वर्षयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन । अहिले किसानले प्रतिलिटर रू. ५३ मा दूध विक्री गर्दै आएका छन् ।
उक्त मूल्यमा दूध विक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर रू. ४ घाटा व्यहोर्न पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअवधिमा औषधि, रेखदेख गर्ने गोठालोको तबलभत्ता, ढुवानी खर्च र अन्य उपकरणलगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएकाले पनि समयानुकूल मूल्य वृद्धि हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले हालकायम रहेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर रू. १० वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर रू। ७६ छ । प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर रू. ६० प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले रू. ८६ मा किन्न पर्नेछ ।
मूल्य समायोजनपछि वृद्धि हुने प्रतिलिटर रू. १० मध्ये रू. सात किसानलाई तथा रू. तीन उद्योगीलाई प्राप्तहुनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ मूल्य लागू भए किसानलाई लागत खर्च कटाएर प्रतिलिटर रू. तीन फाइदा हुनेछ ।
समितिले इलाम, झापा, सुनसरी मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका दूध उत्पादक किसान र दुग्ध उद्योगीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
दूध व्यवसायले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन पुगेको तथ्यांक छ । उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैँसीको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा दूधको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवर्द्धन हुने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करीब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोेजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार हाल वार्षिकरुपमा औषत रू. दुई अर्ब बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदै आएको छ ।
चकलेट, ल्याक्टोजीन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दूध मिश्रण भएका खाद्य पदार्थको समेत हिसाब गर्दा वार्षिकरुपमा रू। चार अर्बसम्मका दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मूल्य समायोजनाका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल भइसकेकाले समयानुकूल हुने गरी छिट्टै दूधको नयाँ मूल्य कायम हुनेछ । रासस
दैलेखमा कुखुरालाई खुवाइने दानाको परीक्षण
निजी डेरीले पनि अत्यावश्यक सेवासरह ढुवानी प्रतीकचिह्न पाए
असार ४, २०७८ असार ४, २०७८ किसान आवाज
बर्दियाका युवा माछा पालन व्यवसायमा रमाउँदै
भदौ १२, २०७८ भदौ १२, २०७८ किसान आवाज